Wednesday September 01, 2021 - 07:45:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mu'asasada As-saxaab oo ah garabka warbaahineed ee Al Qaacidda ayaa baahisay Bayaan kasoo baxay hoggaanka guud ee Ururka kaasi oo lagu bogaadinayo furashadii weyneed ee dhowaan ka dhacday Afghanistan.
Hoggaanka Al Qaacidda ayaa Xarakada Taliban iyo muslimiinta reer Afghanistan ugu hambalyeeyay guusha weyn ee ay ka gaareen ciidamadii gummeysiga Mareykanka.
Al Qaacidda waxay sheegtay in 20 sano oo ixtilaal ah kadib ay Shacabka Afghanistan iyo mujaahidiintiisa ay hadda hanteen miraha jihaadkii waqtiga dheeraa ee ay soo galeen.
Muslimiinta caalamka ayaa loogu baaqay in ay isbarbar taagaan Imaarada Islaamiga ah ee dib usoo laabatay ayna ku taageeraan wax walba oo ay hayaan sida khibradaha, tacliimka iyo arrimo kale.
2- waxay ku tilmaameen guushaan guulweyn oo aan usoo hoyan kaliya reer afghanistan balse usoo hoyatay guud ahaan Muslimiinta caalamka meelkasta oo ay joogaan.
Hoggaanka Al Qaacidda waxay sheegeen inaan la ilaawin doonin kumanaanka shuhadada ah ee ay bixiyeen reer Afghanistan oo ay ugu horeeyaan hoggaanka imaarada Islaamiga sida Sheekh Mullah Cumar, Sheekh Mullah Aktar Mansuur iyo Sheekh Jalaaludiin Xaqaani.
Waxay sheegen in qabkii Mareykanka la jabiyey maantana isagoo jiidaya raadadka guuldarada uu isaga huleelay dalkaas, sidaas uu Allaah kaga dhabayey balanqaadkiisii kuna bari yeelay dhaartuu Mullah Cumar ee ahaa Allaha wuxuu no balanqaaday guul, Buushna wuxuu noo balanqaadya Haziimo....waan arki doonaa cidii guuleysata.
Dadka reer AFghan waxay ugu baaqeen in ay garab istaagaan Imaaradooda oo ay iltizaamaan qaraaraatka iyo go'aanada ay qaadatay imaaradooda oo ah mida masaalixda diintooda iyo tan adduunyadooda dhowreysa.
Al Qaacidda ayaa dadka Muslimiinta ah usheegtay in guusha Afghanistan laga baran karo duruus iyo cibara badan, tan ugu horreysana ay tahay in dariiqa jihaadka uu yahay midka kaliya ee lagu xureyn karo dhulalka Muslimiinta, Umadii u istaagta Jihaadkana aanan marnaba laga guuleysan karin.